I-Intel ifile ngokuKhanya kwemini 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack-Gamepron
INTEL Babhubhe ngokuKhanya kwemini
Ukufa ngoMini ngumdlalo wendabuko "wokuleqa", kodwa unokuba nguthixo njani?
Vula amandla akho okwenyani ngee-hacks zethu ngelixa udlala ngofileyo ngokuKhanya. Thenga imveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
Usuku alwanelanga kwisininzi sabasebenzisi bethu, ngoko ke zizame ixesha elide. Thenga isitshixo semveliso yeveki e-1 namhlanje!
Okwangoku, singakujonga njengosapho apha eGamepron. Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Sebenzisa okungasekhoyo ngathi kukukhanya kwemini Intel yeyona ndlela ilula yokufikelela kwigophe lokufunda eliza nalo mdlalo. Ukuba uvula umdlalo okokuqala, ungakhathazeki! Sebenzisa okungasekhoyo kwethu ngoMini weHoplit Hack kuya kuqinisekisa impumelelo.
Babhubhe ngoKhanya ngoLwazi lweNkcukacha ze-Intel
Ukufa ngoMini kufana nohlobo olugqithisileyo lokufihla kwaye uye kufuna, nangona abo boyisiweyo kulo mdlalo beza kuva ubunzima bokufa okubuhlungu. Xa ungafuni ukuba umntu akuxhome kwihhuku yenyama kwaye akushiye uphume igazi, usebenzisa i-Dead yethu yasemini ye-Intel kuba yeyona nto ibalulekileyo kuwe. Ayizukukwazi nje kuphela ukuba uhlaselo luvela phi, kodwa zininzi izinto ezibandakanyiweyo ngaphakathi eziza kukuvumela ukuba ubaleke ungaphazamiseki phantse ngalo lonke ixesha. Umdlalo wokududuzela abalandeli bayavuya, njengoko ekugqibeleni unokhetho oluthembekileyo!
Gwema umbulali (okanye ubhengeza abaSindileyo) usebenzisa i-Player kunye ne-Item ESP ukhetho, zombini ekuvumela ukuba ubone abadlali kunye nezinto (iihatch, iijenreyitha, njl.njl.) Kwiindawo eziqinileyo. Ulwazi lutshaba luya kukuxelela umgama kunye nemivalo yezempilo, ngelixa i-DBD Aimbot iya kukugcina ubulala. Ukujonga ubuchule kukwakho!
Ulwazi lotshaba (iinkampu, ababulali)
Ukujonga ubuchule obugqibeleleyo
Malunga nabaFileyo ngeMini ye-Intel
Sakaza konke ongathanda xa oku kuvulwa kusasebenza, njengoko iMowudi yokuSasaza luphawu olubalulekileyo. Ukukopela kuya kufuna ukuba kufakwe inaliti, kwaye oko kuya kufuna ukugqobhoza kwi-Discord. Esi sixhobo sangaphakathi kwaye siza ne-HWID Spoofer yayo, ke abasebenzisi abebengavumelekanga ukuba basebenzise isixhobo sehardware ngaphambi kokusebenzisa esi sixhobo ukuze bajikeleze oko. Qinisekisa ukuba ukhubaza ukukhusela kunye ne-anti-virus! Ngaphandle kokwenza oku, i-hack inokufumana iflegi yobuxoki kwaye ayizukusebenza ngokufanelekileyo. Iphuhlisiwe ukuba isetyenziswe ngokungqongqo yi-Intel CPUs, esi sixhobo siza ngesiNgesi kwaye siyakutshintsha indlela yakho yonke yokuFa ngoKhanya.
Kutheni usebenzisa i-Intel emini ngaphaya kwabanye ababoneleli?
Abanye ababoneleli abanakho ukuhambisa umgangatho ofunyenwe kwiGamepron, kwaye oko kuya kuba yinyani kuso nasiphi na isixhobo sethu. Abafileyo ngoKhanya kwemini ye-Intel inezinto zonke abanokuthi basebenzise i-DBD yomsebenzisi, kwaye ke ngaphezulu ngaphezulu koko. Sihlala sihlaziya izixhobo esele sizikhuphile, ke nokuba umdlalo ungabonakala ngathi "mdala" kangakanani, izixhobo zethu ziya kuba zintsha kwaye zilungele ukuya. Kukho isizathu sokuba bonke abasebenzisi bethu bazinikele ekusebenziseni izixhobo zeGamepron, kwaye kungenxa yokuba sibonelela ngezona ziphumo zibalaseleyo- ube yinxalenye yosapho ngokwakho ngesitshixo semveliso!
Akusayi kuphinda unyanzelwe ukuba usebenzise useto olungagqibekanga lomzi mveliso oluza ne-DBD hack. Inye kuphela into esiyifundileyo kule minyaka mininzi yokuphuhlisa ii-hacks kukuba sonke sinezinto esizithandayo, oko kuthetha ukuba siza kuba nezicwangciso ezahlukeneyo zokukhangela. Abanye abantu baya kukhetha i-FOV Circle yabo ukuba ibe nkulu, inee-ESPs ezimbalwa kwiscreen, ngelixa abanye bengafuni i-FOV enkulu kunye nee-ESPs ezininzi kangangoko kunokwenzeka. Ngaphandle kwezinye izinto ezithethwa ziinkampani malunga nokukopela kwabo kwi-DBD, i-Gamepron kuphela komnikezeli we-DBD hacks ebonisa ukwenziwa kwemenyu yomdlalo ophucukileyo. Umhlaba yimbatyisi yakho ngeGamepron!
Qaphela indlela odlala ngayo ngaphambi kokuvumela ukukopela, kwaye uya kubona ukuba iluncedo kangakanani. Injongo yakho iya kuhlala ikho kwinqanaba, kwaye iintshaba azinakufihla kwiso lakho elibona konke!
Yenza into elungileyo kwaye uthenge isitshixo semveliso ngokwakho namhlanje!
Ilindelwe Lawula kunye nabaFileyo bethu ngokuKhanya kwe-Intel?